ကျနော်နဲ့ အိုင်ဖုန်း ပြသနာများ — MYSTERY ZILLION
ကျနော်နဲ့ အိုင်ဖုန်း ပြသနာများ
January 2012 edited January 2012 in iPhone
ညတုန်းကဗျ....ဇော်ဂျီဖောင့် ကို အရင်က သွင်းပြီးသားကို uninstall လုပ်ပြီး ipad keyboard 4.2 သွင်းတာ restart ကျပြီး လုံးဝကိုပြန်မတက်လာတော့ဘူးဗျ... ၁ နာရီကျော်တောင်ပြန်မတက်လာတော့
ကျနော်လဲ ပါဝါပိတ်လိုက်တယ် အခု ပါဝါ ပြန်ဖွင့်တာ ဘာမွကို မတက်တော့ဘူးခင်ဗျ....ကူပါကယ်ပါအုံး....
Restore Firmware သာလုပ်လိုက်ပါတော့
[email protected] ရေ ..ကျေးဇူးဘဲဗျ....သို့ပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်ရပါသနည်း ကျနော်မလုပ်တက်ဘူး
ကျေးဇူးပြုပြီး အစအဆုံး ပြောပြပေးပါသလားခင်ဗျ....အခု ဆိုင်ပို့ဖို့ကလဲ အလုပ်က မအား..
အခန်းနဲ့ စင်တာကလဲဝေး ကျနော့ဘဝ သနားကြပါအုံး...အဟင့်ဟင့်
To Restore Firmware you first you need to download latest firmware
iphone 3GS 5.0.1 - Download
iphone 4G 5.0.1- Download
and need to download itunes latest version and install itunes
itunes 10.5.2 (32-bit) - Download
then put ur iphone to dfu mode..
1. press down both power + home button (10 second)
2. after 10 sec release power button (about 20 second)
3. open itunes you will see Update and Restore button
4. Press Shift + Restore button (select firmware what u download)
5. and wait until finish and enjoy with new firmware...
You will need an internet connection in 4th step.
oh ... i have forgot to say that ... thx @kiawtatzaw
ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျ အခုလို အကြံပေးတာ ပြောပြတာကို
အခု ကျနော့်ဖုန်းက အကိုတို့ပြောသလိုဘဲ ပါဝါ+ဟုန်း ဖိတယ် ဘာမွကိုမတက်ဘူးဗျ။။
စိတ်ပါလေသွားပြီး အိုင်ဖုန်း ကို
r u finish install itunes? after install itune pc can detect ur iphone dfu mode
ကို [email protected]ရေအခုလိုပြောပြပေးတာကျေးဇူးဘဲဗျ...
ဖုန်းက JB လုပ်ထားရင် ဆားဗစ်စင်တာ က ပြင်ပေးပါ့မလားဗျ...အသစ်လဲပေးပါ့မလား...ခင်ဗျား..
အကို mail acc လေးသိလို့ရနိုင်မလားဗျ....တခုခုဆို အကို့ဆီ မေးမလို့ ..
What did you mean by that? You said you phone was restarted but didn't open again. And again, you also said that you turned off the power after one hour! And how did you turn the power off?
Please tell us exactly.
ဟုတ်အကို ဖုန်းက ရီစတက် ကျသွားပြီး ပြန်တက်ဖို့ လော့ဒင်း ဘဲလုပ်နေတာ ၁ နာရီကျော်တယ်ဗျ..
ဒါနဲ့ ကျနော်က စိတ်မရွည် ပါဝါပိတ်လိုက်တယ်....ပြီးတော့ ပါဝါကို ပြန်ဖွင့်တော့ ဘာမွမတက်တော့ဘူးဗျ။။။ အခုထိဘဲ..ကျေးဇူးတင်ပါ၏
ကဲမြန်မာလိုဘဲပြောလိုက်ပါတော့မယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာတော့ ကိုဗညား DFU Mode ကိုပါဝါ+ဟုန်း ကိုဘဲဆက်တိုက်ဖိတယ်ထင်တယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မရနိုင်ဘူး။
ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြန်ပြောပေးမယ် ဒီတစ်ခါ iTunes ကိုအရင်ဖွင့်ထားလိုက်
၁၊ ဟုန်း+ပါဝါ ကို ၁၀စက္ကန့်ဖိထား
၂၊ ၁၀စက္ကန့်ပြည့်တာနဲ့ ပါဝါကိုလွှတ်လိုက် ဟုန်းကိုတော့ ဆက်ဖိထား စက္ကန့်၂၀လောက်ဆိုရင် iTunes ကနေ Restore Mode ပေါ်လာလိမ့်မယ် အဲ့ဒါဆိုရင် DFU mode ထဲကိုရောက်နေပါပြီ။
ကျွန်တော့်မေးလ်ကတော့ [email protected] ဂျီမေးပါ။
ko oscarboy @ ရေ...ကျနော့်ဖုန်းတော့ရသွားပြီးဗျ....ဆားဗစ်စင်တာ သွားပြီး အသစ်လဲပေးလိုက်တယ်..
ဟိဟိ ကျေးဇူးဘဲဗျ.... အိုင်ဖုန်းမွာ သုံးလို့ကောင်းတဲ့ App လေးတွေ ဝေမွ် ပေးပါအုံးဗျ..
မြန်ရုပ်ရွင်ကြည့်လို့ရတဲ့ ဟာလေးတွေ.....မြန်မာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ App တွေပေါ့ဗျ....
ကျနော့်ဖုန်းကအိုင်ဖုန်းဖိုးအက်စ်ပါ...ဂျေးဘရိတ်လုပ် ပြီး ဂီျဗေးကတ်နဲ ့အန်လော့လုပ်ပြီးသုံးနေပါတယ်...ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုမှတ ်တဲ့အခါမှာ နာမည်ပေးပြီးမှတ်ထားပေမယ့် ဖုန်းလာတဲ့အခါမှာရော ကိုယ်ကနေဖုန်းခေါ်တဲ့အခါမှာပါ နာမည်မပါ်ပဲနဲ ့ဖုန်းနံပါတ်ပဲပေါ်နေပါတယ်.....အဲဒါဖုန်းနံပါတ်မှတ်တာ မှားလို ့လားဆိုပြီး နံပါတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ ၀၉ ခံပြီးရော မခံဘဲနဲ ့မှတ်ပေမယ့် မရပါဘူး...နံပါတ်ပဲပေါ်ပါတယ်..အဲဒါဘာဖြစ်လို ့ပါလဲခင်ဗျာ။